ပြည်သူ့အတွက်းအာဏာရှင်ကိုအသက်ပေးပြီး‌တော်လှန်မယ့်လွတ်မြောက်နယ်မြေတစ်နေရာကCDMရဲမေမရည်မွန်မြတ်နိုင် – Khaoread.com
May 7, 2022 RATHA News 0
ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တပ်မတော်က နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီး၍ အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းမှ ပထမဦးဆုံးသော CDM ပြုလုပ်သည့် ရဲမေဖြစ်သည်။
သူမက ငယ်ငယ်ကတည်းက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ချင်ခဲ့သူဟု မရည်မြတ်မွန်နိုင်က ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း မိသားစုကို မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ထဲ ဝင်ခွင့်ပေးဖို့ သူမအကြိမ်ကြိမ် ပူဆာတောင်းဆိုခဲ့သည့်အတွက် မိဘများက ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။…
အဲဒါကြောင့်လည်း အိမ်က မိဘတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့ထဲ ဝင်ခွင့်ပေးဖို့ နှစ်နဲ့ချီ တောင်းဆိုခဲ့ရတယ်”ဟု သူမက ပြောပြသည်။အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ်မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ထဲ ဝင်ရောက်ခဲ့သူ မရည်မြတ်မွန်နိုင်မှာ ရဲသင်တန်းကျောင်းတွင်…
အခက်အခဲ များစွာကြားထဲက စိတ်ပိုင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်စေဖို့ ကြိုးစားလေ့ကျင့်ခဲ့ရသည်။သင်တန်းကာလ တလျောက် နေ့စဉ် နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူအတွက် သစ္စာဆိုရင်း ရွှံ့ထဲဖုန်ထဲ၌ နေပူမိုးရွာမရှောင် စာတွေ့ လက်တွေ့ လေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးနောက်…
ရဲမေဖြစ်ခဲ့သည်။သူမအနေဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့အတွင်း မိမိရည်မှန်းချက်အတိုင်း တာဝန်ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ရင်း တစ်ဖက်မှာလည်း ရဲတပ်ဖွဲ့၏ပျက်ယွင်းနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို သူမ သတိထားမိခဲ့သည်။…
”ရဲထဲက အရာရှိ တော်တော်များများက စစ်ကောင်စီကနေ အသွင်ပြောင်းထားတာတွေများတယ်။ ရဲလုပ်ငန်း၊ ရဲစည်းကမ်းနားမလည်ဘဲ ကိုင်တွယ်ကြပြီး အမှုကိစ္စတွေလည်း အရှုပ်အရှင်းတွေ ဖြစ်လာတယ်။…
ဖော်နိုင်တဲ့အမှုတောင် ဖုံးပစ်လိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိလာတယ်”ဟု မရည်မြတ်မွန်နိုင်က ပြေ..ာပြသည်။ရဲလုပ်ငန်းဌာနအတွင်း ယခုလို စိတ်မသက်သာစရာတွေ ကြုံတွေ့လာရပြီးသည့်နောက်မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ အပေါ်သူမ၏ယုံကြည်မှုကို ကိုယ်တိုင်ပြန်ဆန်းစစ်ပြီး…သေနတ်ကိုင်နေတာ ဘယ်သူ့အတွက်လဲဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးခွန်းထုတ်လာခဲ့သည်။
ယခင်ကတည်းက ပြည်သူကို ကာကွယ်ပြီး အလုပ်အကျွေးပြုဖို့အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ထဲ ဝင်ရောက်ခဲ့သည့် မရည်မြတ်မွန်နိုင်အတွက်တော့ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီခိုင်းသမျှ လက်နက်မဲ့ ပြည်သူကို သတ်ဖြတ်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏လုပ်ရပ်ကို စက်ဆုပ်ရွံရှာခဲ့သည်။…
ထို့ကြောင့်လည်း လူထုအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု – CDM မှာ စောစီးစွာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဧရာဝတီတိုင်းမှ ပထမဆုံးသော CDM ရဲမေအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်။ သူမ CDM ပြုလုပ်မှုကို မိသားစုကလည်း သဘောတူခဲ့သည်။…
သူမ CDM စလုပ်ဆောင်ချိန်က ရုံးမတက်၊ တာဝန်မထမ်းဆောင်တော့ဘဲ အမျိုးတွေအိမ်မှာ နှစ်လကျော်လောက် ရှောင်တိမ်းနေခဲ့သည်။….
လက်နက်မဲ့ ပြည်သူတွေကို အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်နေသည့် စစ်ကောင်စီကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့ လူငယ်တွေ PDF တပ်ဖွဲ့ထဲဝင်ကြတော့ သူမလည်း ပြည်သူကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် PDF ထဲဝင်ဖို့ ကြိုးစားတော့သည်။…
ဒါကြောင့် ကျွန်မလည်း PDF ထဲ ဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ”ဟု မရည်မြတ်မွန်နိုင်က ပြောဆိုသည်။သူမ မိဘတွေက CDM လုပ်တာကို မကန့်ကွက်ကြသော်လည်း မိန်းမပျိုလေးတယောက် PDF ထဲဝင်ပြီး အသက်နဲ့ရင်းကာ….
စစ်ကောင်စီကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မည်ဆိုသောကိစ္စကိုတော့ ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်။”မိဘတွေ ကန့်ကွက်တဲ့ကြားက ကျွန်မ PDF ထဲ ဝင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအတွက် မိဘတွေက ကျွန်မကို အမွေပြတ် စွန့်လွှတ်ခဲ့တယ်။…
တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် ကျွန်မအသက်ကိုတောင် ပေးအပ်ထားပြီး ပြီဆိုတော့ အမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ခံရတဲ့ကိစ္စကို အရမ်းကြီး မခံစားရပါဘူး”ဟု မရည်မြတ်မွန်နိုင်က ပြောပြသည်။ကျွန်မကို ချီးကျူးတယ်ဆို Shareပေးခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ပြုပါအူးနော်။
Credit – Original Writer st